Tilmaamaha ay gabdhuhu ku raacaan wiilasha
Home » Qormooyinka » Tilmaamaha ay gabdhuhu ku raacaan wiilasha	Sawirka/pasosin.com Tilmaamaha ay gabdhuhu ku raacaan wiilasha
31/03/2017	1,587 Views Toddobaadkii hore waxaan blog-geyga ku baahiyay qormo falanqaynaysay tilmaamaha wanwanaagsan oo ay raggu gabadhaha ku raacaan. Waxaa gar ila noqotay, siixiibbada qaarna ay codsadeen in wax laga dhaho sifooyinka ay gabdhuhu rabi lahayeen in ragga nolosha la wadaagaya ay yeeshaan. Qof walba qofka hadda garab jooga ee uu nolosha la qaybsanayo ama uu damacsan yahay in uu la qaybsado, waa qasab in uu ku qanacsan yahay. Ma jiro qof qof kale si go’an ula dookh ah. Balse waxaa jira dhaqammo iyo astaamo wanwanaagsan oo bani’aadamku isku wada raacsan yahay. Sidaas oo kale, waxaa jira astaamo guud oo ay gabar walba rabto in uu wiilka riyadeedu yeesho. Bal tilmaamahan hoose isha la raac oo arag inta aad ka shinsato.
Abuur ahaan dumarka ayaa ka hadal badan ragga [ 🙂 ]. Iyaga ayaa hadalka ka faahfaahin og oo tafaasiisha sheekada ku taagtaagsan og, sida ay dad badan qabaan. Saa daraaddeed, gabdhuhu waa ay ka helaan wiilka dhegta u raariciya oo sheekada si wanaagsan uga gura. Gabadhu waxay jeceshahay wiilka dhibkeeda dhageysta oo aan hadalkeeda dhibsan ama aan warka ku celin. Cilmibaaris ay ka qaybqaateen 1,000 dumar ah oo da’doodu u dhaxeyso 21 iyo 54 ayaa waxaa lagu wayddiinayay in ay sheegaan tilmaamaha ay ragga ku xulan lahaayeen. 53% waxay sheegeen in ay rabi lahaayeen in wiilku uu gabadha daneyn tuso oo uu u dheg raariciyo marka ay la hadlayso gabadhu. Bal ka fakar iyada oo kula hadlaysa adiguna aad moobaylkaaga ku malgan tahay. Iska jir taas oo kale!
Waqti dhow ka hor waxaa la qabay in dumarku aanu jecleyn in raggu uu arrimaha kushiinka faraha la soo galo. Dhaqan ahaan, mar walba hawsha guriga waxaa lagu fiirsadaa gabadha, haddii ay ahaan lahayd hooyo, abbaayo ama afo. Inkastoo laga yaabo in weli ay jiraan dumar raba in wiilku ka fogaado qabashada hawsha guriga, haddana waxaa, taa beddelkeeda, jira dumar fara badan oo soo dhaweynaya in wiilku uu ka caawiyo hawsha guriga sida cunto karin, ilmo hayn ama nadaafad. Nasiibxumo wiilka Soomaaliga intii uu yaraa waxaa hawsha guriga ka xigsaday hooyadii, walaashii ama gabar kale. Haddii aad ka mid tahay, sidayda oo kale [ 🙂 ], wiilasha tirada yar ee cunto karin yaqaan, bishaareyso. Adiga iyo qoftaadaba nasiib ayaad leedihiin!
Waa Maxay Furaha Nolol Farxad iyo Caafimaad Leh?
Previous: FIIRSO: Digniin culus oo ku saabsan qorshe ay dowladdu ka damacsan tahay gobalka Banaadir
Next: WAASUGE IYO WARSAME: Socdaalkii 30ka Maalmood, waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)